Izilinganiso, Ukubuyekeza kanye Nenhloso Yomthengi | Martech Zone
Izilinganiso, izibuyekezo nenhloso yomthengi
ULwesine, May 5, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngesonto eledlule, ngibe nenjabulo yokuhlangana nokukhuluma no UJeff Quipp Ye-Search Engine People, inkampani ye-SEO ne-Internet Marketing. UJeff ulinganise iphaneli ngezilinganiso, ukubuyekezwa kanye nemithombo yezokuxhumana ebengikuyo Sesha i-Marketing Expo ne-eMetrics Conference eToronto nge UGil Reich, I-VP yokuphathwa kwemikhiqizo ku Izimpendulo.com.
UJeff uveze ukhiye owodwa - inhloso yesivakashi, into esihlala sizama ukuyiqonda njengoba sisebenza namakhasimende ukwandisa amasayithi abo ngokusesha nokuguqulwa. UJeff wahlukanisa lezi zingxenye zombili zaba kucatshangelwa futhi umfutho abathengi futhi baxoxa ngomthelela wezilinganiso nokubuyekezwa. Ukubuyekezwa okungekuhle kube nomthelela omkhulu ekuziphatheni kokuthenga. UJeff ubhekise ocwaningweni olwenziwe yiLightspeed Research e2011:
Abathengi abangama-62% bafunda izibuyekezo online ngaphambi ukuthenga.
Ama-62% wabathengi okuxoxwe ngabo abathembekile nezinye imibono yabathengi.
Ama-58% wabathengi ahlolisise imibono ethembekile evela kubantu ababenzayo Wayazi.
Abasebenzisi abangu-21% okuxoxwe nabo bathe izibuyekezo ezi-2 ezimbi zashintsha izingqondo zabo.
Abasebenzisi abangu-37% okuxoxwe nabo bathe izibuyekezo ezi-3 ezimbi zashintsha izingqondo zabo.
Bangu-7% kuphela abathengi abaphendukele kumanethiwekhi abo omphakathi ukuze babuyekezwe, abanye baphendukela kumasayithi wokuqhathanisa ezitolo futhi izinjini.
Ungase ucabange ngezilinganiso nokubuyekezwa njenganoma yiliphi ikhasi elinezinkanyezi ezithile nezinye izimpendulo ezingaziwa ezivela kubasebenzisi… kepha uJeff uphonsele inselelo izethameli ukuthi zicabange ngale kwalokho:
Youtube izixhumanisi, izintandokazi namazwana kuthinta amazinga wevidiyo.
Imiphumela yebhizinisi yasendaweni ezinjini zokusesha (Bing, -Google) inezibuyekezo ezihambisanayo. Inombolo yezibuyekezo, ukubuyela emuva kanye nobuningi bezibuyekezo kungathinta amazinga wokuchofoza. Izinjini zokusesha nazo zidonsa izilinganiso nezibuyekezo ezivela kwamanye amasayithi wokubuyekeza avela eceleni njenge-Yelp.
Isici sosesho esenzelwe wena i-Google sikuvumela ukuthi ususe isayithi emiphumeleni yosesho. Ngabe lokho kuzothinta izinga lesiza uma abantu abaningi belibeka ezingeni eliphansi? Mhlawumbe.
Izilinganiso nokubuyekezwa akuzona zonke izinhlekelele nezinsizi ezinkampanini ezibhekana nezimpendulo ezingezinhle online. Ama-33% alabo abathole impendulo evela enkampanini ngenxa yokubuyekezwa okungekuhle uthumele ukubuyekeza okuhle. Ama-34% asuse ukubuyekeza kwawo okungekuhle ngokuphelele!
Isethulo sikaJeff sasibanzi - sikhuluma ngokusetshenziswa kweselula kanye nezinyathelo zeGoogle zokufaka izingxoxo zemithombo yezokuxhumana ngqo kwimiphumela yokusesha. Isifundo kulezi zibalo, kunjalo, ukuqinisekisa ukuthi usebenza ukukhuthaza izinkampani zakho online. Cela amakhasimende akho ukuthi anikeze izibuyekezo futhi ubakhombise ukuthi bangawahambisa kanjani. Phendula futhi uyekise izingqinamba eziholele ekubuyekezweni okungalungile ukuze ukwazi ukuguqula lezo zimo.
Ukuntuleka kwezibuyekezo nokubuyekezwa okungekuhle kungaguqula umthengi ongaba khona. Bheka ngale kwesayithi lakho futhi ubheke isithunzi sakho kuzilinganiso nezindawo zokubuyekeza. Zizoba nomthelela ekuziphatheni kokuthenga.
Tags: 2011izimpendulo.cominjongo yomthengigil Reichujeff quphaukubuyekezwa kokukhanyaizilinganisoizilinganiso nokubuyekezwaIzibuyekezo
Ukuzijabulisa Isiginesha Yakho Ye-imeyili Nge-WiseStamp
Ngaphandle Kwamathuluzi Afanele…
May 6, 2011 ku-2: 44 AM
Ngisanda kuthola i-imeyili evela ebhizinisini lokulungisa izimoto engilisebenzisayo. Ibhizinisi elincane, lendawo eyodwa esanda kuqala ukusebenzisa ukumaketha okuku-inthanethi. Banikela ngesigqebhezana esingu- $ 10 maqondana nokulungiswa kwesikhathi esizayo uma ngingathumela isibuyekezo ngomsebenzi wami wakamuva wenkonzo nabo. Ukunikezwa kube ngesikhathi esifanele, kwafika okungaphansi kwesonto ngemuva kokuvakashelwa kwenkonzo. Kwakuwumnikelo wesikhathi esisodwa kuphela, futhi ngacabanga indlela enhle yokungidlulisela kusayithi labo.